BAAG CALEEN: QALABKA WAXTARKA LEH IYO CODSIGA - DAAWADA DADWEYNAHA
Qol kasta waxaa jira boorso caleemo qallalan.
Xilliga wanaagsan ee la yaqaan ayaa dhab ahaantii haysta codsiyo aad u ballaadhan.
Baag caleen waxay leedahay hanti daweyn oo qiimo leh waxayna ka caawin kartaa inay la qabsadaan cudurada iyo dhibaatooyinka qurxinta, laakiin isticmaalka noocan ah waa lagama maarmaan in la tixgeliyo khilaafaadka.
Waxyaabaha kiimikada ah iyo qiimaha nafaqada ee caleen
Leaves of Laurel ee qoyska Laurel waxaa loo isticmaalaa sida bahalka. Dhammaan qaybo ka mid ah warshadda geedka waxaa ku jira gogol, fareeshe, saliida lagama maarmaanka ah, qadhaadh.
Waxyaabaha kiimikada ah ee caleemaha caleemaha waa mid aad u ballaaran:
Fiitamiinada: A, B1, B2, B6, B9, C, PP.
Macro macaan: potassium, kalsiyum, magnesium, sodium, fosfooraska.
Waxyaabaha raadraaca: birta, manganese, copper, selenium, zinc.
Acids: Acid fatty (Omega-3 iyo Omega-6), dufan, shuban iyo dufan aan cadad lahayn.
Qiimaha nafaqada 100 g oo caleen ah waa 7.61 g oo ah borotiinka, 8.36 g oo dufan ah, 48.67 g oo ah carbohidrates, 26.3 g oo ah dhirta cuntada, 5.44 g oo biyo ah iyo 3.62 g oo ash. Kalorie content Baaga caleen - 313 Kcal.
Ma taqaanaa? Bachelor-ka "Academician" macneheedu waa "Latin" wuxuu u tarjumayaa sida "looxa laamus."
Qalabka Faragelinta ee laurel, sida loo isticmaalo warshadda daawada casriga ah
Baaga caleen waxay leedahay liiska dhammaan guryaha daawooyinka: antiseptic, hemostatic, anti-bararka, anti-bararka, hypoglycemic, diuretic; laurel wuxuu awoodaa in uu kordhiyo hawlaha ilaalinta jirka iyo xoojinta nidaamka difaaca, wuxuu hagaajiyaa rabitaanka cunnooyinka iyo dheef-shiidka, wuxuu hoos u dhigaa heerkulka sare iyo cadaadiska dhiigga, wuxuu yareeyaa lalabbada.
Daawada rasmiga ah ee rasmiga ahi marnaba ma isticmaasho laurel Laerel Noble ma ahan warshad farmaajo, saliida lagama maarmaanka u ah cilmi baaris ku samayso farshaxanka tijaabada ah.
Marka loo eego Diiwaanka Gobolka ee Daawooyinka Ukraine, xasaasiyad ka timaada caleenta baayacmushtarka waxaa loo isticmaalaa diyaargaroowga loo qaato si loogu ogaado xasaasiyadda.
Qaar ka mid ah shirkadaha daawada dabiiciga ah waxay isticmaalaan saliida saliida ee muhiimka ah ee wax soo saarka bakteeriyada anti-bararka ee murqaha iyo kala-goysyada, iyo sidoo kale boomaatada xoolaha.
Ma taqaanaa? Qiime weyn oo daawo waa dhir kale - shahwad qulqulaya (xerada camphor), oo laga soo saaro saliidda xayawaanka (camphor) - walax daawo oo wax ku ool ah. Marka la karinayo, laastikada camphor waxaa loo isticmaalaa oo keliya in lagu daro cunnada khudradda Hindiya sida lafdhabaadka macmacaanka iyo caanaha.
Isticmaalka beero ee daawada dadweynaha
Waxaa laga xayuubiyay dhaqanka rasmiga ah ee rasmiga ah, geedka caleen, sababtoo ah hantidiisa iyo helitaankiisa, waxay ku heleen codsi ballaadhan oo daawada dhaqameedka ah. Waxaa jira cuntooyin kala duwan oo la isticmaalo.
Si kastaba ha ahaatee, si aad u isticmaasho qalabkaas waa inay ahaadaan kuwo taxaddar leh oo xasuusnaada inay inta badan yihiin caawiye, marmarka qaarkoodna amaan. Haddii ay dhacdo in xad dhaaf ah, sunta caleenta waa suuragal tahay.
Daaweynta cudurada habka muruqyada
Si loo yareeyo xanuunka oo loo yareeyo barar ku dhaca xubnaha, waxaa lagu talinayaa in lagu xoqo maqaarka laurel saliid muhiim ah.
Xanuunnada arthritis iyo xanuunka wadaagga ah ayaa diyaariya faleebo: 5 g oo caleemo ah ayaa lagu shubay biyo karkaraya (1.5 koob), waxoogaa yar la kariyey waxayna ku adkeeyeen darmuus muddo 3 saacadood ah. Qaado qaybo yaryar maalintii oo dhan. Faleebadani waxay ka caawisaa jirku inuu la qabsado murgacashada cusbada.
Sidoo kale, daaweynta, waxaad ka iibsan kartaa gelooyinka iyo boomaatada la soo saaro lauleel ama u diyaari guriga. Saliid sidan samee: Isku dheelitirnaanta 1: 2 caleemaha geedka iyo subag, ciriiri isku dar biyo kulul, cadaadis iyo qabow.
Sida loo daweeyo hargabka iyo hargabka
Baay caleen waxay noqon kartaa kaaliye ka hortaga hargabka, taas oo caawisa decoction laga bilaabo spoonful ah caleen la jajabiyey iyo nus litir oo biyo karkaraya. Waa in la kariyaa 20 daqiiqo kulaylka yar, cadaadis iyo cabitaan nus koob oo ah cuntada ka hor. Decoction Tani waxay ka caawisaa hagaajinta nidaamka difaaca.
Ujeedooyinka loo yaqaan 'prophylactic', ayaa dhowr dhibcood oo saliideed muhiim ah loo adeegsan karaa baalalka sanka, macbadka iyo bartamaha wejiga iyo si fiican u neefsanaya labada isqabta.
Suugo leh faleebo laaurel ah ama laamboono leh saliida lagama maarmaanka u ah qolka si loo nadiifiyo.
Isticmaalka laurel ee daaweynta cudurrada cunaha iyo sanka
Iyadoo loogu talagalay daaweynta sinusitis, cadaadis diiran oo leh faleebo caleenta ah iyo neefsasho leh decoction ama laurel saliid muhiim ah ayaa loo isticmaalaa.
Qaadida caleemaha waxay kaa caawineysaa yareynta xanuunka dhuunta iyo bararka xuubka xabka ee cunaha.
Caleenta caleenta waxaa loo isticmaalaa qashinka xanuunka dhuunta.
Sidee beelel ku caawin kartaa miyir-beeleedka
Iska yaree raaxo la'aanta inta lagu jiro finanku ku yaalo madow, waxaad isticmaali kartaa infusions.
Qaaddo shinbir ah oo caleen ah oo caleen ah, shaaha oo ah geedo oregano, 400 ml biyo karkaraya. Ku hay ilaa 15 daqiiqo iyo cadaadis. Qaado 2 qaado oo saddex jeer maalintii maalintii cuntada ka hor.
Qaaddo shinbir ah oo caleen la jarjaray, 2 qaado oo ah chamomile, 2 qaado oo of Hypericum, litir oo biyo karkaraya. Ku adkeyso 3 saacadood. Qaado 1 qaado.
1-2 caleemo cusub oo cusub, 150 ml biyo karkaraya. Nooga muddo 15 daqiiqo ah, daadi, qaado oo ah maraq lagu qasi karo 100 ml oo macdan ah.
Waa muhiim! Isticmaalka faleebo caleenta cagaarsheed wuxuu leeyahay khatar u ah dadka qaba ulo caloosha.
Isticmaalka laurel ee gynecology
Dumarka waxay isticmaalaan caleen qadiimi ah si ay caadi u noqoto wareegga caadada.
Diiqada, xanuun, miisaan lumis, isbedelka cimilada, ama aagagga waqtiga, mararka qaarkood caadada ayaa dib loo dhigaa. Ama soo noqnoqon: u sahlanaanta, ka hor safar ganacsi, fasax ama dhacdo muhiim ah, haweenku waxay doonayaan in ay sababaan maalmo xili hore ah. Xaaladahaas oo kale, kaaliyaha ayaa noqon doona faleebo ama decoction of caleemaha laurel. Waxaa jira cuntooyin kala duwan oo daawadan ah.
40-60 xaashida ku shub laba koob oo biyo ah, isku kari ilaa kiilow saacadood oo kuleyl ah. Marka decoction qaboojiyey, waa in la miiray. Qaado daaweynta ka hor cuntada, maalin aad u baahan tahay inaad cabto hal koob oo maraq ah.
Qiyaas ahaan nus litir oo biyo ah waxaad u baahan tahay inaad qaadato baakad caano ah (10 g). Saacad gudahood, maraq waxaa lagu kariyaa kuleylka hooseeya. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad cabto oo cabto 1 koob.
Waa muhiim! Isticmaalka sharootada cagaarsho ee haweenku waxay leedahay waxyeelo aad u muhiim ah: caadada daahirta ah waa in aysan keenin uur! Baag caleen - macnaheedu waa jinsi qadiimi ah.
Sidee loo dalbadaa beelelka ilkaha
Qalabka daawada ee caleen caleen ayaa loo isticmaalaa daaweynta cudurada loo yaqaan "periodontal disease" iyo "stomatitis".
Dhibku waa mid aan fiicneyn, laakiin waxay dili kartaa jeermiska waxayna yareyn kartaa xanuunka.
Dhibaatooyinka ilkaha isticmaalaan ku luqluqo afkooda adoo adeegsanaya decoction ah caleen, taas oo ay tahay in aad qaadato litir biyo ah iyo qaado qaado oo caleen ah, isku kari ilaa 10 daqiiqo, qabow oo tirtira afkaaga dhawr jeer maalintii.
Daawo "stomatitis", waxaad sidoo kale cadaysan kartaa caleen.
Iyadoo lafdhabarta, waxaad isticmaali kartaa faleebo ee caleemaha. Waxa lagama maarmaan ah in la qafaashado dhawr goor, ku shub biyo karkaraya, ku adkee iyo cadaadis. Marka uu sii xumaado qandhada, ku luqluqo biyo diirran (laakiin ma kulul).
Waa muhiim! Laga soo bilaabo diirka liinta iyo caleen qoyan guriga dhexdiisa waxaa lagu helaa dharka ilkaha. Ku dhalidda cirridka ilkaha waxaad u baahan tahay inaad xoqdo qaybaha jilicsan ee ciridka, ka dibna u daadi budada laastikada ilkahaaga, oo afkaaga ku biyo raaci 5 daqiiqo.
Baaga caleen iyo qurxinta
Maanta waxaa suurtogal ah in la helo iibinta caleenta khamriga-glycerol caleenta loogu talagalay diyaarinta alaabada la isku qurxiyo, laakiin inta badan ujeedkani wuxuu si fudud u qallajiyaa caleen ama saliid lagama maarmaan ah. Waxyaabaha laga sameeyo "Lavrushka" waxay ka hortagaan jiritaanka xasaasiyad caleen.
Qubeyska aromaticka leh ee laamoolka
Qubeyska leh caleen qallalan waxay qaadataa carruurta iyo dadka waaweyn. Decoction of laurel wuxuu ka caawiyaa dhallaanka leh muuqaalka maqaarka ee maqaarka, ka yar yareeya barar, diif. Ilmaha qubeyska, dib-u-hagaajin 7-10 xaashid ayaa loo diyaariyey oo lagu daraa biyaha qubeyska.
Dadka qaangaarka ah, barkimooyin dabiici ah ayaa caawimaya xoojinta nidaamka difaaca jidhka, la tacaalida dhibaatooyinka maqaarka (dhimista, nabarrada, cudurka psoriasis, dhididka badan), habdhiska dareemaha (hurdo la'aan, walbahaar, niyadjab). Biyaha aan kululeyn ee qubeyska ku dar jaranjaro 20-30 gooyn ah, oo lagu daray hal saac. Qaado qubeyskan ayaa lagu talinayaa 20-30 daqiiqo.
Laurel iyo maqaarka wajiga
Isticmaalka alaabada la isku qurxiyo laamoolka wajiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xalliso dhibaatooyin badan: nabaro nadiif ah, nadiif ah, lakabyo fudud iyo dhibco da ', maqaarka maqaarka, hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka, yareeya baruurta iyo daaweynta caabuqa.
Tonics, kiriimyada iyo maskaxda maqaarka iyo maqaarka dhibaatada:
Dhibaatada maqaarka waxaa lagu tirtiraa qoyaan caadi ah oo caano ah iyo biyo (oo ah 1: 1). Wixii saameyn kale oo tonic ah, waxaad dhigi kartaa dareeraha oo waxaad waji kartaa wejigaaga barafka. Iyada oo maqaarka dufanka leh uu kor u kaco tonic, waa inaad ku dartaa qaaddo aalkolo ah.
Ku dhaji caleemo qashin ah, ku shub biyo kulul, oo ka baxso dhowr saacadood iyo cadaadis. Ku dar saliida dabiiciga ah iyo geed shaaha muhiimka ah. Haddii aad wejigaaga si joogto ah maalin walba u tirtirto, waxay kaa caawineysaa inaad dhejisid daloolo, burburiso barar iyo dhalaalid.
Si aad u sameyso kareem, faleebo ayaa laga sameeyaa galaas biyo ah iyo caleemo dhawr ah, taas oo ay ku jirto liin iyo khamri lagu daro (laba qaado).
Maaskarada lagu yareeyo maqaarka iyo adkeynta maqaarka: ku walaaq hal qaado oo maraq ah hal qaado oo malab, ukun cad, saliid saytuun iyo liin (10 dhibcood midkiiba). Codso nus saac.
Maaskaba: Labo qaado oo dhoobo ah oo la isku qurxiyo oo la isku dhajiyey.
Muuqaalada iyo kiriimyada si ay u qoyaan maqaarka qalalan:
Maaskarada leh jalatin: ku shub qaado qaado jelatin leh decoction caleemaha, ka dibna hal daqiiqo ku dar shaaha of glycerin iyo isku daraan. Codso inaad wajahdo 20 daqiiqo.
Maaskeel leh oatmeal: marka hore waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso saldhig udgoon ee caleemaha la jajabiyey (laba qaado) saliid saytuun diiran (100 g). Isku dar ah waa in lagu hayaa 24 saacadood oo lagu keydiyaa qaboojiyaha. Wixii maaskaro waxaad u baahan tahay inaad qaadato qaar ka mid ah shidaal oo aad ku dartid wax yar oo aad u baakadeysan. Codso inaad wajahdo 20 daqiiqo.
Maaskarada baaldiga badda: Isku dar faleebo caleen leh labeen kareem iyo saliid buckthorn badda.
Baaga caleen timaha
Daryeelka timaha, caleen caleenta wuxuu muujiyaa guryaha: firfircoonida, dib u soo kabashada, kicinta, ka-hortagga-xayawaanka, waxay xakameysaa qanjidhada xayawaanka.
Waxyaabaha daaweynta timaha fudud ee fudud - saliid kareysalagu dulsaaray caleen. Waad karsan kartaa ama iibsan kartaa muhiim ah. Si aad u samayso, waxaad u baahan tahay inaad ku dartid 20 caleemo oo ku shub hal galaas oo saliid ah oo saliid ah (saytuun, guntin, dhoobo) oo ku adkeyso dhowr maalmood (doorbidid toddobaad).
Dhibco yar oo saliideedkan ah ayaa lagu dari karaa shaambada iyo boogaha si saameyn xoog leh loo sameeyo ama lagu sameeyo maaskaro. Ujeedadaas awgeed, saliidda waa in lagu rusheeyaa xididdada timaha, bac balaastig ah waa in madaxa la geliyaa oo lagu duubaa tuwaal ama maro kulul. Dhowr saacadood ka dib waxaad u baahan tahay inaad timahaaga dhaqdo. Maaskadani waxay caawisaa timaha qalalan iyo kuwa liita.
Waa muhiim! Saliidda guriga ka sameysan ee laamoolka ah maaha sida xoogga loo saaro saliid lagama maarmaanka ah, waxaana loo isticmaali karaa tiro badan.
Wixii ku tirtiri timo lid ku ah qandhicir ama pruritus, laga soo qaado caleemaha laurel. Wixii 1 litir oo biyo ah karkariya waxaad u baahan tahay inaad qaadato 30 qaybood. Faleebo waxay ubaahan tahay inay qaboojiso, cadaadiso oo timaha ku tirtirto.
Si loo xoojiyo maaskarada timaha waa la diyaariyaa: ku dar laba qaado oo malab ah faleebo laba qaado oo caleen ah. Isku dar waxaa lagu daboolayaa dhamaan dhererka timaha, saacad kadib marka la maydho shaambo.
Way fiicantahay in aad biyo raaciso timo shuban ka dib marka aad ku dhaqdo decoction daciif ka soo qaado qaado caleemaha la jajabiyey iyo litir oo biyo ah. Maraqku wuxuu ubaahan yahay 5 daqiiqo inuu karkariyo kulaylka yar, qabow iyo cadaadis.
Baaga caleen ee karinta
Iyada oo ay ugu wacan tahay urka quruxda badan ee basbaaska leh iyo dhadhanka qadhaadh, caleen cagaarshow waa mid si fiican loo yaqaan oo aad u badan. Khamriga ugu caansan ee karinta waa caleen qalalan, mararka qaar isticmaalaya caleemo cusub, khudradda la qalajiyey iyo caleemaha qallalan ee dhulka.
Baaga caleen waxaa loo isticmaalaa dhadhanka dhadhanka, borscht, maraq, suxuunta khudradda, hilibka, kalluunka, cuntada badda, suugada.
Saliidaha muhiimka ah ee caleemaha ayaa si dhakhso ah u baxaya, sidaas darteed inta lagu jiro diyaarinta saxamada ugu horeeya, caleemaha qoorta waa in la dhigaa 5-10 daqiiqo ka hor diyaar u ah, waxaad ku dhejin kartaa xasilloonida bartamaha habka. Sida caadiga ah ku dar tiro caleemo. Waa suurad wacan in laga soo saaro xaashida saxan dhamaystiran.
Laurel waxaa badanaa loo isticmaalaa in la qaado oo la ilaaliyo khudradda, hilibka iyo kalluunka, subag dhirta. Ma aha oo kaliya kobcinta ilaalinta leh caraf udgoon, oo sidoo kale waxay ka caawisaa in la keydiyo muddo dheer sababtoo ah guryaha antiseptic.
In warshadaha cuntada, caleen caleen waa maaddada mustardar, suugada, kalluunka qasacadaysan, maraqa, sausages, pates. Waxay badanaa isticmaashaa caleen dhuleed.
Ma taqaanaa? Caleen qallalan waa qayb ka mid ah jiiska dabiiciga ah ee Georgian "raj-suneli". Sidoo kale waxaa jira dhir, dill, cilantro, basbaaska gaduudka, basil, celery, cagaarka, marjoram, geed qabta, beerta beerta, fenugreek buluug, marigolds.
Laurel: diyaarinta alaabta ceeriin ee caafimaadka
Qadarka ugu weyn ee saliidaha lagama maarmaanka ah ee caleemaha laurelka ah waxaa laga helaa Nofeembar ilaa Disembar. Leaves soo ururiyey dhirta oo gaaray 4-5 sano. Caleemaha caafimaad qaba - cagaar madow, oo aan qafilanayn, oo leh ur adag.
5 ilaa 10 maalmood oo qallalan oo xaalado dabiici ah, caleemuhu si buuxda u qalalan. Iyada oo qalajiyo macmal ah, heerkulka waa inuusan ka badneyn 40 ° C. Ku kaydi caleemaha qallalan waxaa lagula talinayaa in dhalada galaas leh dabool leh meel qabow mugdi ah.
Haddii caleen cagaaran ay leedahay midab madow, waxa loola jeedaa in ay mar horeba lumisay dhadhan, iyo sifooyinka faa'iidada leh waa wax yar.
Laurel saliid asaasiga ah ayaa la helaa ka dib markii la hagaajiyo caleemaha cusub iyo ubaxyada.
Ma taqaanaa? In dabiiciga ah, laurel wuxuu ku koraa Badda Mediterranean, Crimean, qaybta galbeed ee Transcaucasia, koonfurta-galbeedka ee Krasnodar Territory.
Contraindications iyo saameynaha caleenta caleen
Walxaha ku jira laaluushka, qanjidhada minar uurjiifka ah, oo laga yaabo in ay khatar u tahay haweenka uurka leh: Decoction caleenta caleenta waxay keeni kartaa dhiigbax culus iyo dhicis. Isticmaalka laurel laguma talinayo inta lagu jiro nuujinta.
Dhibaatooyinka aan fiicneyn ee isticmaalka caleenta baaygu wuxuu ku dhacaa dadka u nugul xasaasiyadaha: xanuunka caloosha, caloosha, cuncunka cunaha iyo maqaarka, cuncunka, oo la mid ah cudurka urtikaria.
Daaweynta caleenta Bay waxay leedahay khilaaf ee cudurada beerka iyo habka dheef-shiidka (boogta peptic, xannuunka mindhicirka, caloosha), kediska xiga, macaanka daran.
Mistresses ayaa muddo dheer ogaatay in maraqa ugu caansan ee la badbaadin doono marka lagu daro jawi si uu u cuno, iyo cunidda saxan leh caraf udgoon leh oo caleen ah oo caleen ah - macnaheedu ma aha kaliya in la qanciyo gaajada, laakiin sidoo kale waa ku raaxeeyaa. Haddii aad ogtahay dhammaan waxyaalahaa isticmaala daawadan, bay caleen waxay ka caawineysaa inay ku guuleystaan ​​guusha culuumta ayna wanaajiso caafimaadka.